WARARKA - KHAATUMO ONLINE TV
TOOS UGA DAAWO KHAATUMO ONLINE TV WWW.SSCYOUTH.WEBS.COM
DOORASHADA SOOMAALİA TOOS UGA DAAWO HALKAN
Posted by laascaanood on November 23, 2012 at 6:45 PM comments (0)
waxaan aad iyo aad uga raali galinaynaa mudadii yarad ee aan hawada ka maqnayn taas oo ay nahaysatay cilad farsamo waxaan
SIDOO KALE HADA OO AY CILADU XOOGAA JIRTO LKN WAXAAN ISKU DAYAYNAA SI DHAKHSO BADAN IN AAN HAWADA UGU SOO LAABANO WAA MAHADSAN TUHIIN
Posted by laascaanood on September 22, 2012 at 8:10 AM comments (0)
Kooxo Hubaysan Ayaa Xalay Ku Dilay Laba Ruux Magaalada Muqdisho,Labadan Ruux Ee Ladilay Ayaa Mid Ka Mid Ahi Waxa Uu Ahaa Askari Halka Kakalena Uu Ahaa Qof Rayid Ah.
Dilkan ayaa sida lagu soo waramayo waxaa gaystay laba nin oo iyagu Baaskoolado ku hubaysnaa kuwaas oo toogtay markii hore ninka shicibka ah oo isagu markaa fadhiyay meel Maqaaxi ah,isla waxyar ka bacdi ayaa hadana waxa la maqlay rasaas kale taas oo lagu dilay mid ka mid ah Askarta Ciidamada Degmada Boondheere.
Kabacdi ayaa meeshii waxaa soo gaaray Ciidamo ka tirsan dawlada kuwaas oo rasaas kor u furay kabacdi ay u suura gashay in ay gacanta ku soo dhigaan labadii nin ee gacan ku dhiiglayaasha ahaa mid ka mid ah.
Nin kii gacan ku dhiiglaha ahaa ee ay Askartu soo qabteen ayaa waxaa lagu xidhay saldhig ku yaala Degmada Boondheere.
Degmada Boondheere ayaa,ayaamihii ugu danbeeyay waxay noqotay meelaha ugu dilka badan .
Isku soo wada duuboo amaanka Magaalada Muqdisho ayaa ayaamihii ugu dan beeyay ayaa waxa uu noqday mid faraha ka baxay.
Dhanka kale haayadaha Amniga ayaa waxa ay leeyihiin waxbaa ka qabanaynaa oo waan badalaynaa xaaladan faraha ka sii baxaysa.
Posted by laascaanood on September 22, 2012 at 8:05 AM comments (0)
Dibad Baxyo Dad Reer Liibiya Ah Ay Iskaga Hor Yimaadeen Ayaa Waxay Dhalisay In Lagalo Saldhigyo Kooxo Hubaysan,Halkaa Ayaa Waxaa Ka Dhashay Dhimashada illaa 4 Ruux.
Dadwayne caadi ah oo Libyan ah ayay isku dhaceen dagaalyahaniinta maleeshiyo ku sugan magaalada Benghazi kadib dibadbax aad u wayn oo ay dadka magaalada kaga soo horjeedeen awoodda kooxo hubaysan oo aan dowli ahayn.
Dhowr saldhigyada maleeshiyooyinka ayaa dibadbaxayaashu iyo booliiska military-gu xoog ku galeen.
Ugu yaraan afar qof ayaa lagu dilay, iyadoo ku dhowaad afartan qof ay ku dhaawacmeen.
Rag hubaysan ayaa rasaas ku furay dibadbaxayaasha oo ku sugnaa xarumaha guutada al-Sahaty, dibadbaxayaashu waxay xoog ku galeen saldhigyada maleeshiyada Ansar Al-Sharia oo lala xiriirinayo dhacdadii todobaadkii hore lagu dilay safiirkii dalka Maraykanka.
Posted by laascaanood on September 10, 2012 at 3:35 PM comments (0)
Waxaa guud ahaan ba Magaalada Buuhoodle ee xarunta Gobolka Cayn ka Socda dabaal degyo kala duwan kuwaas oo lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee dalka soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud inkastoo aan wali si rasmi ah loo shaacin cida ku guulaysatay hogaanka dalka.
Hadaba iyada oo ay taasi jirto ayaa waxa gudaha Magaalada Buuhoodle laga maqlayaa dhawaqa rasaasta kala duwan kuwaas oo farxad iyo damaashaad loo ridayo, iyadoona taas lagu nisbaynayo rajada cusub ee uu dalku galo.
Dad weynaha ku dhaqan Magaalada Buuhoodle ayaa waxa ay rajo wacan ka muujiyeen waxqabadka iyo waliba barnaamijyada dhanka horumarineed ee uu la imaan doono madaxweynaha cusub ee dalka soomaaliya, iyagoona si weyn u soo dhoweeyey doorashadii xalaasha ahayd ee madaxweynaha lagu soo doortay iyo waliba qaabkii ay u dhacday, waxa ayna sheegeen in doorashadaasi ay ahayd mid si xaalaala u dhacday loogana baahan yahay hogaanka cusub inuu la yimaado waxqabad tayo leh.
Sidoo kale dad weynaha ayaa aad ugu riyaaqay in 21 sano kadib ay doorasho ka dhacdo dalka gudihiisa, iyagoona sheegay in taasi ay tahay horumar balaadhan oo lagu talaabsaday lagana sugayo ganacsatada soomaaliyeed in ay maal gashtaan dalkooda hooyo si horumar balaadhan looga gaadho dhinacyo badan.
Si kastaba ha ahaatee xaalada dalka soomaaliya ayaa haatan ah mid aad u wacan una muuqata in ay mar labaad dib u hanan doonto soomaaliya qaranimadeedii iyo magicii ay hore u lahayd isla markaasna ay dad badan kusoo noqon doonaan dalka kuwaas oo iyagu ka cararay dagaaladii ka dhacay gudaha dalka oo rajo wacan ka qabay in ay kusoo laabtaan dalka marka laga gudbo xiliga kumeel gaadhka.
Posted by laascaanood on September 10, 2012 at 3:05 PM comments (0)
Muqdisho (RBC) Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si rasmi ah ugu guuleystay doorashada madaxtinimada Soomaaliya ee caawa ka dhacday magaalada Muqdisho.
Mudane Xasan Sheekh wuxuu ku dhashay magaalada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan sanadkii 1955-tii halkaasoo uu ka bilaabay waxbarashada Quraanka iyo mida hoose.
Sanadkii 1981 ayuu Xasan Sheekh ka qalinjabiyey Jaamacada Phobal University ee dalka Hindiya, wuxuuna ka qaatay shahaadada Master Degree.
Sanadkii 1993 ayuu dalka dib ugu soo laabtay wuxuuna shaqo ka helay hay’ada UNICEF isagoo noqday sarkaalka dhanka waxbarashada ee u qaabilsan hay’adda dhanka waxbarashada Bartamaha iyo Koonfurta Soomaaliya.
Sanadkii 1999 wuxuu aas aasay machadka SIMAD oo hadda isu bedelay Jaamacad kuna yaalla magaalada Muqdisho.
Sanadkii 2011 ayaa Xasan uu Magaalada Muqdisho kaga dhawaaqay xisbi uu u bixiyey Nabada iyo Horumarka [PDP] kaasoo uu isaga gudoomiye ka noqday. Illaa haddana waxaa uu hogaamiyaa xisbigaasi.
Xasan Sheekh wuxuu ku hadlaa luuqadaha Soomaali iyo English.
LIVE UGA DHAGAYSO HALAKAN RIIX HOOS
Xasan Sheekh Maxamud Oo Noqday Madax Waynaha Jamhuuriyada Faderaalka Soomaliya
Posted by laascaanood on September 10, 2012 at 2:25 PM comments (0)
Waxaa Soo Gaba Gaboobay Wareegii Sadexaad Kaas Oo Gabi Ahaanba Uu Codka Ugu Badani Uu Helay Xasan Sheekh Maxaud Oo Isagu Ku Guulaystay Madax Waynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya.
Waxaa wareegii labaad u soo gudbay sadex murshax oo ay laba ka mid ahi tanaasuleen iyada oo markii ay tanaasuleen lagalay waregii ugu danbaynta ahaa ayaa waxaa soo ifbaxday markii la bilaabay daqiiqadihii ugu horeeyayba in lagu dhawaaqayo Xasan Sheekh Maxamed oo isagu ku qaaday cod aad u fara badan oo helay 190 cod halka uu Sheekh helay 70 cod waxaa lagu coday 2 waraaqwaxaana Madax wayne Noqday Xasa Sheekh Maxamud noqdayna Madax waynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya
Maanta ay bishu tahay 10-Bisha Septemper Maalin tan ayaa waxay noqonaysaa maalin taariikhi ah iyada oo ay noqonayso maalintii ugu horaysay ee lagu doorto tan iyo 21-sano ee la soo dhaafay Madax wayne Magaalada Muqdisho.
Sidoo kale ayaa waxaa taariikh u galaysa Madax wayne Xasan Sheekh Maxamud in uu noqdo tan iyo waagaas in uu noqdo Madax waynihii ugu horeeyay ee lagu soo doorto Magaalada Muqdisho
Hadaba wali iyada aan latirin tirade codadaka ayaa waxaa si aqlabiyad ah ugu guulaystay Madax waynaha Jamhuuriyada Fadaraalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamud.
live u dhagayso hoos riix
sscyouth kala soco tebinta doorashada madaxweynaha
Posted by laascaanood on September 10, 2012 at 12:25 AM comments (0)
mareegta warraka sscyouth waxay dhageystayaasheeda iyo akhristayaasheeda, hadduu Eebbe idmo, u ballan-qaadeysaa inay si toos ah doorashada madaxweynaha ugala socon karaan qeybta live-stream-ka ee bogga. live streem aan ku leenahay
LIVE U DAAWO RIIX HOOS
shabakda sscyouth oo si toos ah u tabin doonta doorashada madaxtinimada soomaaliya
Posted by laascaanood on September 8, 2012 at 3:40 PM comments (0)
Shacabka Soomaaliyeed ee ku kala nool dalka gudihiisa iyo dibedda ayaa isha ku haya loolanka siyaasadeed iyo tartanka madaxweyne ee ka socda magaalada Muqdisho.
ma reegta shabakada sscyouth waxay dhageystayaasheeda iyo akhristayaasheeda u suurtagelisay inay toos u dhageystaan khudbadaha ay musharraxiintu ka hor jeedinayaan xildhibaannada baarlamaanka Soomaaliya.
mareegta sscyouth waxay maalinta Isniinta ee nagu soo aaddan kuu suurtagelin doontaa hadduu Eebbe idmo inaad si toos ah uga dhageysato cod-bixinta doorashada madaxweynaha, iyadoo sare loo qaaday tayada maqalka iyo tirada dhageystayaasha.
Warsame ibraahim caydiid oo ah guddoomiyaha dhallinyarada degmada ssc ee gobolada sool sanaag iyo cayn oo la hadlay shabakada sscyouth ayaa ku ammaanay in ay tahay warbaahin ku hadasha afka dageenada ssc sida wacan ee ay dadka soomaaliyeed ugu sahashay tebinta tooska ah ee doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya.
halkan si toos ah uga daawo ama ( dhagayso )
Laascaanood: Kaalmo loo codsanayo xarunta agoonta
Posted by laascaanood on September 8, 2012 at 3:30 PM comments (0)
Maamulka xarunta agoonta ee magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa ka codsaday hay’adaha samafalka iyo dadka hantida haysta in ay kaalmo la soo gaaraan xaruntaasi.
Jaamac Xasan Maxamed oo ah maamulaha xarunta oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in xilligan ay xaalad adag oo dhinac walbo leh soo wajahday xarunta oo ay ku jiraan carruur badan oo agoon ah.
Sheekh Axmed Maxamed Suleymaan oo ka mid ah culimada ku nool magaalada Laascaanood ayaa sheegay in caawinta carruurta agoonta ah ay tahay wax weyn oo Alle agtiisa ajar looga helayo maalinta qiyaamaha, isagoo shacabka ku boorriyay in ay ka qeyb qaataan gargaarkaas.
Faadumo Axmed oo ka mid ah waalidiinta carruurta agoonta ah ayaa
sheegtay in aysan heli karin kharashaad ay wax ku baraan carruurtooda, sidaa awgeedna ay bulshada ka codsanayaan in ay soo garab istaagaan
Ciidanka dowladda oo qabsaday Warshiikh
Posted by laascaanood on September 8, 2012 at 11:00 AM comments (0)
Ciidanka dowladda Soomaaliya
( SSCYOUTH )Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo is kaashanaya ayaa barqadii maanta la wareegay gacan ku haynta degmada Warshiikh ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Goob-jooge ku sugan Warshiiq ayaa Bar-kulan u xaqiijiyay in ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay gudaha u galeen degmada, iyagoo iska caabbin aan weyneyn kala kulmay maleeshiyo ka tirsan al-Shabaab oo halkaas joogtay
Ciidamada ayaa la sheegay inay u ruqaansadeen deegaanka Raage-ceelle.
Tallaabadan ayaa imaaneysa iyadoo ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay horey ula wareegeen gacan ku haynta deegaannada Ceel-macaan iyo garoonka Cisalleey ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Sheekh Axmed Dhicisow oo geeriyooday
Posted by laascaanood on September 8, 2012 at 10:45 AM comments (0)
Sheekh Axmed Cabdi Dhicisow
Alle ha u naxariistee, waxaa magaalada Muqdisho ku geeriyooday Sheekh Axmed Cabdi Dhicisow oo ahaa guddoomiyaha Midowga Culumada Soomaaliyeed.
Sheekh Axmed Dhicisow wuxuu xalay ku geeriyooday gurigiisa, isagoo qabay cudurka dhiig-karka, sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen qaar ka mid ah qoyskiisa.
Maanta ayaa lagu wadaa in meydka Sheekha lagu aaso magaalada Muqdisho.
wiil dhalinyaro ah oo u dhasay g/sool laascaanood oo soo bandhigay qalab casri ah oo loo isticmaalo garoomada
Posted by laascaanood on September 8, 2012 at 3:05 AM comments (2)
wIIL Dhalin yaraa oo la dhaho Cabdiqaadir maxamed jaamac xayir oo ku nool magalada Lasanod ayaa wuxuu soo bandhigay qalab casri ah oo caalamka laga isticmaalo Khaasatan Ciyaaraha Xiliga la badalo Ciyaartowga qalabka la isticmaalo ... Qalabkaasoo uuu isagu gacabtiisa ku sameeyey .... Hambalyo Abdiqadir si tooas aha uga daawo halkan
Toban Ka Mid Ah Murashixiinta Xilka Madax Waynaha Oo Hadlay
Posted by laascaanood on September 7, 2012 at 7:05 PM comments (0)
1- Axmed Ismaaciil Samatar
3- Maxmed Axmed Saalax
5- Maxamed Cabdullaahi Oomaar
6- Shariif Shiikh Axmed
7- Cabdi wali Max'ed Cali Gaas
8- Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo
10- Cumar Salaad Cilmi.
Arrimaha ugu waaweyn ee ay ka hadleen ayaa waxa ka mid ah wax ka qabashada ammaanka dalka, dhisitaanka ciidanka Soomaaliyeed, siyaasadda arrimaha dibedda, dhaqaalaha, dib u dhiska dalka, dib u heshiisiinta, wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland iyo arrimo kale
Final “onslaught” on Kismayo prepared
Posted by laascaanood on September 6, 2012 at 4:00 AM comments (0)
Somali National forces/RBK
Somali national forces and their allied AMISOM troops in the lower Juba are preparing for a final onslaught to capture Kismayo port city where Al-shabaab militants are staying put.
Kenyan military spokesman,Col.Cyrus Oguna said they are preparing for the capture of Bibi settlement which is one of the outskirts of Kismayo in a bid to move towards the port city.
The Spokesman added that the coalition forces have been succeeding in its last missions one of them being the capture of miido on Friday.
Bibi is just 90 KM away from the port city of Kismayo, a stronghold of the Al-qaeada linked Shabaab militias.
Recently the Kenyan navy shelled Kismayo to flush out the militant Islamist group al-Shabaab.
Macalimiinta Kenya Oo Sameeyay Shaqajoojin Gashay Maalintii Labaad
Posted by laascaanood on September 4, 2012 at 9:50 AM comments (0)
Macaliinta Kenya Oo Sameeyay Shaqa Joojin Gashay Maalintii Labaad, Macalimiitan Oo Tiradoodu Gaadhayaan Illaa 300,000 Ayaa Waxay Saamayn Wayn Ku Yeelatay Ardayda wax Ka Dhigta Schoolada Kenya.
Gobolka Waqooyi Bari Ardayda kunoo oo ay ku nool yihiin dadka Kenyanka u dhashay kana soo jeeda Soomaalida ayaa waxay samayn wayn ku yeelatay shaqa joojinta ay sameeyeen Macalimiintani kuwaas oo ah kuwa ka cabanaya lacagta ay dawladdu siiso oo ah mid aan ku filayn .
Waalidiinta ku dhaqan gobolkaa ayaa waxay dawladda ku eedeeyeen in ay iyadu wado tacadiyada lagu hayo Macalimiinta oo ay sheegeen in ay siin lacag ku filan Macalimiinta,Kana codsaday in ay sida ugu dhakhsaha badan ay u xaliyaan dhibka ka jira Macalimiinta ay u kor dhiyaan lacagta.
Dhanka kale wasiirka wax barashada Kenya Mutula Kilonzo ayaa ugu baaqay Macalimiinta in ay shaqada ku laabtaan hadii ay ku laaban waayaan ay ka jari doonaan lacagta inta maal-mood ee ay maqan yihiin.
Wasiirka ayaa sheegay in ay Macalimiintu sameeyaan mar kasta oo ay soo dhawyihiin doorashooyinku arinkan oo kale tana ay tahay muran siyaasadeed hase yeeshee aanan yeelli doonin ayuu yiri wasiirka wax barashada .
Waxa jiray heshiis ay galeen Macalimiinta iyo dawladda Kenya kaas oo ay galeen sanadkii 1997 oo ahayd in loo kordhiyo lacagta 100kiiba 300 kaas oo ay sheegeen macalimiintu in uu wali taagan yahay.
Xaga kale iskuulada gaarka loo leeyahay ayaa iyagu ah kuwa aysan wax saamayn ah aysan ku yeelan arrinta shaqa joojinta Macalimiinta oo iyagu si caadi ah u dhiga wax barashadii kuwaas oo iyagu heshiis kula gala Macalimiinta siiyana waxa ay kula galaan markaas.
Dhagayso Wararkii habeenimo Ee radiokhaatumo kuna Dhagayso Qodobo xiiso Badan(Dhagayso)
Posted by laascaanood on September 1, 2012 at 2:20 PM comments (0)
SI TOOS AH UGA DHAGAYSO HALKAN RIIX HOOS
HEESTA MAANTA IYO SSCYOUTH DHUGASHO WACAN
Posted by laascaanood on August 29, 2012 at 3:15 AM comments (0)
Taariikh Nololeedka Guddoomiyaha Baarlamaanka Cusub Jawaari
Posted by laascaanood on August 29, 2012 at 2:50 AM comments (0)
Maxaad Kala Socotaa Taariikhda Gudoomiyaha Baarlamanka Cusub ?Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari)Oo Loo Doortay Xilka Gudoomiyaha Baarlamaanka Maanta.
Siyaasiga 67 jirka ah kuma cusba siyaasadda, inkastoo sanadihii ugu dambeeyay uu u badnaa shaqooyin uu la la qabtay qaramada midoobay, jaamacad ku taalla Norway oo uu wax ka dhigayay iyo guddoomiye uu ka noqday guddiyo qaran oo qaabilsanaa dastuurka.
Prof Maxamed Cismaan Jawaari wuxuu horay u soo noqday wasiir dhowr jeer ka tirsanaa dowladii Maxamed Siad Barre ee xukunka laga tuuray sanadkii 1991. Wuxuu kaloo dowladaas ka qabtay xilal kale oo dhowr ah.
Tababar ahaan, waa qareen, wuxuuna prof Jawari horay u soo guddoomiyay guddiga madaxa bannaan ee dastuurka ee soo diyaariyay dastuurkii ugu dambeeyay.
Wuxuu ka soo jeedaa oo ay isku hayb yihiin guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Shariif Xassan Sheekh Aadan oo isagu ka mid ahaa musharixiinta madaxwaynenimada.
Hase yeeshee, waxaa suurtagal ah in guusha prof Jawari ay si toos ah meesha uga saarto hamiga madaxweyninimo ee uu ahaa Shariif Xassan Sheekh Aadan.
Waayo, nidaamka 4.5 ee awood qaybsiga ayaa ka hor istaagaya hogaamiyayaasha isku qabiilka ah in ay wada qabtaan sadexda xafiis ee ugu sareeya ee kala ah kan madaxwaynaha, kan ra'iisul wasaaraha iyo kan baarlamaanka.
Siciid Maxamed Caddow oo in muddo ah ahaa xoghayntii shaqsi, ayaa ka war waramaya qofka uu yahay Prof Jawari.
"wuxuu dhashay 1945, wuxuuna ku dhashay degmada Afgooye, wuxuu registration ka qaaday degmada Buurhakaba, wuxuu ka baxay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed, waa Khabiir taqasusyo badan soo sameeyay xagga shareecada Islaamka iyo law-ga 'comprehensive Law' waa nin ka soo shaqeeyay dhowr dastuur oo Soomaaliya lahayd laga soo bilaabo 1960-kii."
Inta badan dadku way soo dhoweeyeen in uu noqday afhayeenkii ugu horeeyay ee baarlamaanka Soomaaliya ee lagu sameeyo gudaha dalka.
Maadaama uusan si toos ah uga qaybgalin dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya muddada hareeyay iyo isku dhacyadii qabaa'ilka, ee qaar badan Soomaalida ah ku howlanaayeen way ku caawisay in uu taageero xoog leh ku kasbado.
LIVE DHAGAYSO HEER KULKA QABYAALADEED EE REESUL WASAARAHA CABDI WALIGAAS ( SIR FASHILANTAY )
Posted by laascaanood on August 29, 2012 at 2:25 AM comments (0)
( sscyouth muqdisho ) Ra'iisal wasaaraha cabdi waligaas oo wakhtigiisu sii dhamaanayao isaga oo
Laga duubay si kuna jiray shir ya beeshu lahayd oo dhanta khadka telefoonka ah
Cavdi wali wax uu si talantaaliya u soo abaaray SHeekh shariif sheekh axmed waxana uu ku tl maamay
Nin rabashado wadaha ah oo ka soo horjeeday daw ladii Cabdulaahi Yuusuf
Sidoo kale Gaas waxaa uu si cad u weeraray Gabadh Soomaaliyees isagoo isu malaynaya inuu yahay Afhayeenka Maamulka Puntland kadib markuu si adag u difaacay Hogaamiyaha Puntland Faroole oo uu sheegay inuusan ahayn Budhcad badeed .
Ra’iisul Wasaare Cabdiweli gaas oo xiliga uu shirka ku jiray maalmo uun ka hor uu madaxweyne sh-shariif u magaacabay xilka Ra’iisul-wasaare ayaa waxaa sidoo kale uu weeraray Dowlada Ethiopia waxaana uu sheegay in Dagaalkii lala galay Ciidamada Itoobiyaanka ah uu isagu u arkayey mid afka baarkiisa ah oo Hawiye Ku doonayey inuu xilka kaga tuuro Madaxweyne Abdullahi Yousuf.
Heerkulka Qabyaaladeed ee Cabdiwali gaas ayaa ah mid dadka intii dhegaysatay ama daawatay ay aad ula yaabeen isagoo Waqtigaas ay Dadku u malaynayaan inuu yahay Ra’iisul wasaare Soomaaliyeeed balse noqday nin ku shaqeeya fikrada Faroole , waxaana uu sidoo kale aaminsan yahay in Dowlad aan ahayn tan Puntland aysan ka jirin Dhulka Soomaalida.
Heerkulka Qabyaalada Cabdiweli Gaas ayaa waxaa uu sidoo kale ku darsaday Cadaawad gaar ah oo uu u qabo Ummada ku abtirsata Khaatumo isagoo xiligan loolan ugu jira in Beesha Dhulbahante aysan Saamayn ku yeelan Saaxada Siyaasadeed Ee Soomaaliya, Sidoo kale Abdiweli gaas ayaa ah nin aaminsan in Hawiye yahay cadawga Koobaad ee Beeshiisa, dhanka kale abdiweli gaas oo ah nin qabyaaladu ku fogaatay wuxuu aaminsan yahay in maamulka Puntland yahay kan ugu Sareeya Maamulada Soomaliya ka jira.
Sidoo kale Gaas ayaa aaminsan Dadka kasoo barakacay Koonfurta Soomaaliya inay yihiin dad qaxoonti ah oo aan u dhalan Puntland isagoo ku tilmaamay inay yihiin dadka Qaraxyada iyo amni xumada ka wada Puntland.
Hadaba Su’aalaha iswaydiinta mudan ayaa ah C/weli gaas Ma Afhayeenka Puntland baa mise waa Ra’iisul wasaare Soomaaliyeed ? Ma Ambassadorka Puntaland baa mise wuxuu hayaa Xil Qaran? Abdiwali Gaas Ma Yahay Nin U Qalma Xilka uu hayo hadda? ma la odhan karaa waa nin u tafaxaytay burburinta Soomaali iyo cadaawad isu gelinta? Maxaad ku qiimayn lahayd Abdiweli Gaas?
Akhriste si aad u daawato heerkulka qabyaaladeed ee Gaas xaga hoose chick dheh si aad u daawato Cadaawada iyo heerkiisa qabyaaladeed ee uu u qabo Soomaalida aan beeshiisa ahayn.
SITOOS AH UGADHAGAYSO HALKA HOOSE RIIX
LIVE DHAGAYSO WAREEGA LABAAD IYO JAYLAANI NUUR LIKAR OO LOODOORTAY GUDOOMIYE KU XIGEENKA BAARLAMAANKA
Posted by laascaanood on August 28, 2012 at 3:00 PM comments (0)
Waxaa iminka lasoo gaba gabeeyey wareega labaad ee doorashada Guddoomiye kuxigeenka koowaad ee Baarlamaanka Soomaaliya, waxaana ku guulaystay Jaylaani Nuur Iikar.
Wareega labaad ayaa waxaa isugu soo haray labada musharax ee Jaylaani Nuur Iikar iyo C/weli Sheekh Ibraahim Muudey.
Jeylaani Nuur Iikar oo hoggaanka haya ayaa helay 91-cod halka C/weli Sheekh Ibraahinm Muudey uu helay 58-cod.
Intaasi kadib ayaa C/weli Sheekh Ibraahim Muudey waxa uu u tanaasulay Jaylaani Nuur Iikar oo sidaasi ku noqday Guddoomiye kuxigeenka koowaad ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Kadib doorashada Guddoomiye kuxigeenka koowaad ee Baarlamaanka waxaa la dooran doonaa Guddoomiye kuxigeenka labaad ee Baarlamaanka Soomaaliya.
SI TOOS AH UGADHAGAYSO HALKAN